Indlela yokuba yindoda ekhangayo | Amadoda aneSitayile
Indlela yokuba yindoda ekhangayo
Uloyiso lomfazi isekhona kubomi bethu bentlalo, kwaye siyathemba ukuba ayinciphi. Kutshanje abasetyhini bakhalaza ukuba izakhono zokoyisa azisekho njengoko zazinjalo, nangona amanye amadoda bagcina le classicism. Yiba nokuba kunjalo, indoda iyafuna uzive unomtsalane kwaye uqinisekile ukuba uya kukwazi ukulithabatha elo nyathelo.
Ukuba yindoda enomlingo kuya kukunceda uzive wonwabile. Ngoluhlu lwethu lweengcebiso sinokukunceda ukuba uvelele zonke iimpawu osele unazo ngaphakathi, Asizukuzama ukwenza ukuba ujongeke njengomntu owahlukileyo, kodwa ukuze ubonakale ngamandla akho onke yonke into obuyigcinile.
1 Indlela yokuba yindoda ekhangayo
1.2 Wunyamekele umzimba wakho
1.3 Yikhathalele indlela onxiba ngayo
1.4 Sebenzisa ubukrelekrele bakho kunye nokhuseleko
1.5 Yiba nethemba ngesipho soburharha
1.6 Bonisa umanyano lwakho kwaye ube nobuchule
1.7 Zijikeleze ngabantu abasemgangathweni
Umfowunelwa wokuqala iya kuhlala iyinto ebonakalayo, nangona ezinye iinkalo ngokwenene zibandakanyiwe kamva, njengobuntu bakho, abantu abakungqongileyo nendlela osabela ngayo kwabo bantu. Injongo yalo kukwazi yonke into esinokuyigqamisa ngathi kunye noko kufuneka sikucinezele ukuze sibe yindoda enomtsalane.
Ubuhle bubalulekile, kodwa asiyi kuyithatha njengento yokuqala yoqhagamshelwano, okanye njengomgangatho obalulekileyo. Ubuhle bunempembelelo njengomlinganiselo wokuqala woqhagamshelwano kwaye oko sithetha ukuba wenza konke okusemandleni phucula kwaye wenze ubuhle onke amalungu anokuba nomtsalane. Ukusuka apha kufuneka ulandele uluhlu lweempawu ukuze ukwazi ukuthanda umtsalane wakho. Kunokwenzeka ukuba ube mhle kwaye ungabi nawo umtsalane konke konke, kwaye kunokwenzeka ukuba ungabi mhle kakhulu kwaye ube nomtsalane kakhulu.
Wunyamekele umzimba wakho
Akunyanzelekanga ukuba ube nomzimba ogqibeleleyo, kodwa ukuba uzikhathalele kwaye ubonisa kunokuba luncedo kakhulu. Abafazi basenokufumana indoda enomzimba olungiswe kakuhle nobuso obuqhelekileyo obunomtsalane, yaye indoda entle enomzimba ombi isenokungabonakali inomtsalane.
Kufuneka unakekele inkangeleko yakho kwaye oku kufuneka yinyamekele iinwele zakho, kunye neenwele ezilungileyo. Ukuba awuzange uzame khulisa iindevu mhlawumbi ingaba ngumgangatho owongezayo. Abasetyhini bafumana iindevu emadodeni njengento enokubakho kwaye ngoku zithandwa kakhulu.
Unokuba yindoda entle kanjani
Yikhathalele indlela onxiba ngayo
Lolunye lweempawu ezibalulekileyo. Akukho mfuneko yokunxiba iimpahla zomyili okanye uhambe nezona mpahla zixabisa kakhulu. Isinxibo sesinye sobuntu bethu kwaye sinokukhethwa kakuhle gxininisa zonke iimpawu ezintle into esinayo. Khetha yonke into ekwenza uzive ukhululekile kwaye uphilile, unganxibi iimpahla ezindala kunye nenkangeleko egugileyo.
Umzimba wakho kufuneka uhambelane nempahla yakho. Kufuneka ube ne umzimba ucocekile, ucocekile kwaye unuka kamnandi. Khangela nevumba elimnandi, njengevumba elimnandi okanye njengedeodorant.
Sebenzisa ubukrelekrele bakho kunye nokhuseleko
Indlela yokuqala yokunxibelelana yile nto uza kuyiqaqambisa kwaye uya kuyenza ngamazwi akho. Ukuzithemba kuya kukwenza uzithembe ngakumbi ekwazini ukuba usabele njani ngaphandle kwamathandabuzo ukuba wenze okulungileyo okanye okungalunganga. Indoda ezisa ukhuseleko inokutsala kakhulu, ukuba kunxibelelwano lokuqala sele udangele ngaphandle kokudala ukungakhuseleki, loo ntombazana iya kufuna ukuhlala nawe amaxesha amaninzi. Ubulumko kufuneka buhambelane, ke ukuba unomdla ngayo yonke into oyaziyo kwaye onokuba negalelo, oko kukugcina njengomntu onomtsalane kakhulu.
Yiba nethemba ngesipho soburharha
Iivibes ezintle zitsala abantu. Ukuba nembono entle luphawu othi, ukuba uyalugcina, unokukunika ukuzithemba okukhulu. Ukuba olu phawu luyagcinwa luyakwazi gcina ikratshi kuzo zonke izinto ozizuzileyo. Kanye kunye nomqondo wokuhlekisa baya kwenza inqaku lomlingo. Ibhinqa libona indoda enomtsalane xa bezicingela ndonwabile, ndinobuhlobo yaye ngaloo ndlela ubenza babonakale bekrelekrele ngakumbi.
Bonisa umanyano lwakho kwaye ube nobuchule
Umanyano lwakho ibonisa okuninzi okungaphakathi kuwe. Yiba nembeko, uzithobe kwaye ngaphezu kwako konke ukubonisa inxalenye yakho yobumbano yenza abafazi bazive betsalelekile. Kodwa oko kufuneka kuvele kuwe, ungenzi umfanekiso othi ekuhambeni kwexesha ubonisa ukuba awuhambi nawe, nangona kunjalo, ukuba yinto ovakalelwa ngayo, ungayifihli.
Yenza ubuchule ikwafumana amanqaku, nokuba ungumntu ozifundisayo. Oku kubonisa ukuba unokuba liqabane lothando eligcwele izinto ezilindelweyo. Imiceli mngeni emikhulu abayitsalayo ivela kumadoda athanda ukufota, imibongo, ukufunda, itekhnoloji entsha ...
Zijikeleze ngabantu abasemgangathweni
Asikuceli ukuba uhlale ujikeleze abantu abanomdla kwaye wenze ukuba kubonakale ngathi ukufutshane nelanga elitshisa kakhulu. Kodwa Zama ukuba ungazingqongi ngabantu abanetyhefu, i-negative kwaye ayibonakalisi kakuhle. Olu hlobo lwabantu luyakwazi ukukuthabatha njengomntu kwaye xa ufuna ukuvula imida baya kukuthintela ukuba uye phambili.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Amadoda aQinisekileyo » Ukunyamekela » Indlela yokuba yindoda ekhangayo
Indlela yokuba nobudlelwane obunempilo